ISiphepho u-Ophelia sihlasela i-Ireland namuhla siphula amarekhodi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isiphepho u-Ophelia njengamanje
Isiphepho U-Ophelia ufika e-Ireland namuhla. Izwe liqaphile ngokubomvu, lapho imimoya enamandla evela esiphepho isivele ibonwa. Ukugxila okuyinhloko okulindeleke ukuthi kufike emahoreni ambalwa alandelayo, kuzodlula kulo lonke ugu olusentshonalanga. Ukuvunguza komoya kuzofinyelela eNgilandi, futhi kulindeleke ukuthi kusukela namhlanje kusihlwa kuqale ukonakala, ngemuva kokuwela izwe lonke usuka eningizimu uye enyakatho. I-Ireland izoba nesiphepho esikhulu kunazo zonke kusukela ngo-1961.
Umbuzo omkhulu osengqondweni yawo wonke umuntu ukuthi isiphepho salolu sayizi singafinyelela kanjani eYurophu. Eqinisweni, u-Ophelia vele usethe irekhodi njengesiphepho sokuqala esikhulu esakhiwa futhi saqoshwa endaweni ebanzi le kude empumalanga. Lesi simo asikaze siqoshwe ngaphambili.
Ngabe u-Ophelia uyisiphepho sokuqala ukushaya iYurophu?
Isibikezelo samahora angu-6-7
I-Ophelia bekungeyona ukuphela kwesiphepho esihlasele iYurophu. Umbuzo othi "Kungani kungekho ziphepho e-Europe?" Akulungile ngokuphelele. Kuyinto engajwayelekile futhi engajwayelekile, akukho kungabaza, ikakhulukazi ngenxa yamazinga okushisa kwamanzi olwandle abeka ubutha kulezi zivunguvungu ezinkulu. Kepha uma ukufudumala kwembulunga yonke kuqhubeka, Ochwepheshe abaningi bayavuma ukuthi imiphumela ayinakulindeleka, nokuthi neziphepho zingagcina zifikile.
Uma sibheka emuva, sithola iSiphepho Ukholo esafika sibuthaka eNorway ngo-1966. IGordon, eyahlasela iziqhingi zase-Azores nase-United Kingdom ngo-2006, njengoFaith, kwakuyiziphepho ezafika eYurophu ngemuva kokushaya Izwekazi laseMelika. Bakwenze ngamandla amancane, isigaba 1. Ngo-2005 sinoVince owangena eNhlonhlweni Yase-Iberia, futhi owayeqeqeshwe ogwini lwaseMorocco. Kepha bekuyibo kuphela okwamanje.
Ngakho-ke i-Ophelia iba yisiphepho sokuqala esikhulu ukufika eYurophu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » ISiphepho u-Ophelia sihlasela i-Ireland namuhla siphula amarekhodi
Buyini ubusika benyukliya?